‘कमरेड’ शब्द खास अर्थ के हो ? यसको कसरी उत्पत्ति भयो ? – Gandaki Chhadke
कमरेड शब्द स्पेनिश भाषाको कामाराडाबाट आएको हो। जसको शाब्दिक अर्थ कोठामा सँगै बस्ने साथी हुन्छ। कमरेड शब्दले राजनीतिक रंग फ्रान्सेली क्रान्तिबाट पायो। समाजवादी र मजदुरहरूबीच सम्वोधन गर्नका लागि प्रिय शब्द बन्यो–कमरेड।
युरोपमा कमरेड शब्द उन्नाइसौँ शताब्दीमा निकै चल्तीमा थियो। समाजवादी आ’न्दोलनसँगै कमरेड शब्दको प्रयोग राजनीतिक वृत्तमा व्यापक भएको हो। भारतका नेहरूदेखि नेपाली काँग्रेसका संस्थापक विपी कोइरालाका लागि कामरेड आफ्नै जातको शब्द थियो।
कमरेड शब्दको साइनो रुसी भाषासँग छैन। तर, यसको विश्वव्यापीकरण र कम्युनिस्टीकरणका लागि रुसी क्रा’न्तिको मुख्य हात छ। सोभियत क्रा’न्तिकारीहरू एकअर्कालाई सम्वोधन गर्न तबारिस शब्दको प्रयोग गर्थे। छोटकरीमा टोभ भनिन्थ्यो। सोभियत क्रा’न्तिसम्बद्ध लेख, रचना, दस्ताबेज, भाषण आदिमा तबारिस शब्दको प्रयोग नभएको सायदै भेटिएला।
कम्युनिस्टहरूको बन्न पुग्यो। आज विपीका अनुयायी कोही कँग्रेसजनलाई कमरेड भनियो भने उसको सामान्यतया जवाफ हुन्छ – म कमरेड होइन। अर्थात् म कम्युनिस्ट होइन ।कमरेड शब्दको मूलमै फर्कौं। कोठामा सँगै बस्ने साथी अर्थात् आफ्नो सुख–दुःख नि’र्वस्त्र रूपमा देखेको म’र्दापर्दा सबैभन्दा बढी काम लाग्ने मित्र भन्ने अर्थ थियो कमरेडको।
राज्यव्यवस्थाअनुसार सम्वोधनका लागि विभिन्न शब्दको प्रयोग हुन्थ्यो वा हुने गर्छ। राजा र रैतीलाई गर्ने सम्वोधनमा फरक, धनी र गरिबका लागि गरिने सम्वोधनमा फरक, लिं’गअनुसार सम्वोधनमा फरक अर्थात् सम्वोधनमै मान्छेको औकात झल्काउने शब्दको प्रयोग समाजमा थिए वा छन्।
समाजवादी हुन् कि कम्युनिस्टहरू सम्वोधनमै हुने वि’भेद रुचाउँदैनथे। त्यसैले वर्ग, जात, औकात, लिं’ग केही नछुटाउने कमरेड शब्दलाई प्रगतिशीलले पछ्याए। ‘कमरेड’को सामान्य अर्थ साथी, दाँैतरी वा मित्र हो। विकासका क्रममा यस शब्दले विशिष्ट अर्थ वहन गरेकाले पछि आएर यो शब्द एउटै उद्देश्य र लक्ष्य बोकेर हिडेका र कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्दा प्रयोग गर्न थालियो।
कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेका सबै सदस्य समान मानिने हुँदा एक अर्कालाई सम्बोधन गर्दा समानता बो’धक शब्द कमरेड (साथी) को प्रयोग गरिएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्षदेखि तल्लो कमिटीका सदस्यसम्मका सबै सदस्यलाई कमरेड भनेर सम्बोधन गरिन्छ।
‘कमरेड’ शब्दले समानता र सम्मान दुवै जनाउँछ। कम्युनिस्ट क’म्युनिज्मको अ’नुयायीलाई कम्युनिस्ट भनिन्छ। ‘कम्युन’ बाट कम्युनिज्म र कम्युनिस्ट बनेको हो। ‘क’म्युन’ भनेको साझा खेतीपाती, साझा उत्पादन, समान वितरण र उत्पादित वस्तुमा साझा स्वामित्व रहेको समुदाय वा जनपद हो।
यस्तो समुदाय वा जनपद भएको सामाजिक विकासको उच्चतम अवस्था क’म्युनिजम हो। उत्पादनका साधनमाथि सार्वजनिक स्वामित्व रहने हुँदा यस व्यवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिले क्षमताअनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको दाम पाउँछन् र त्यहाँ सबै खालको शो’षण समाप्त भई सा’म्य स्थिति रहन्छ।
कम्युनिज्ममा स’र्वहारा वर्गको अ’धिनायकत्व, व’र्गविहीन सामाजिक व्यवस्था, शारीरिक र बौद्धिक श्रमका बीच समानता एवं राष्ट्र–राष्ट्रका बीच बन्धुत्वको भावना रहन्छ। कम्युनिज्मलाई समाजमा स्थापित गर्न चाहने, शो’षण, द’मन र अ’न्याय–अत्याचार एवं निजी सम्पत्तिको वि’रोध गर्ने,
सा’मूहिक उत्पादन पद्धति, सामूहिक जीवन र समानतामा विश्वास गर्ने, मा’र्क्सवादी ले’निनवादी वैज्ञानिक विचार धारामा दृढ रहेको, स’र्वहारावर्गको पार्टीको सामूहिक अनुशासनमा रहने क्रा’न्तिकारीलाई कम्युनिस्ट भनिन्छ।
गोल्डेन बुटका लागि सुनिल क्षेत्री मुख्य दावेदार